हास्दै रमाउदै घर जाने बेला म बाकसमा लास लिएर कसरी फर्किउ? – Namaste Host
February 22, 2021 February 22, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on हास्दै रमाउदै घर जाने बेला म बाकसमा लास लिएर कसरी फर्किउ?
काठमाडौं, फागुन ९- दुबईमा सवारी दुर्घटनामा एक नेपाली युवाको निधन भएको छ । झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका-३ खुज्नाबारी घर भएका कैलाश बिश्वकर्माको गत फेब्रुअरी ४ तारिखमा सवारी दुर्घटनामा निधन भएको हो ।
कम्पनीको कामबाट फर्कैदै गर्दा सवारी दुर्घटनामा उनको निधन भएको थियो । १८ दिन पहिले निधन भएका बिश्वकर्माको श’ व आज साँझ १० बजे नेपाल आइपुग्ने पारिवारिक श्रोतले हाम्रोसंचारलाई बताएको छ । मृ’त क कैलाश बिश्वकर्माको श’ व श्रीमती मनु सापकोटाले सँगै लिएर आउदैछन् ।
म एक्लै केहि गर्न नसक्ने भए मलाई तिम्रो साथ चाहियो बुडि भनेर मलाई बिदेश ल्याउनु भो, तर आज मलाई यहि बिदेशी भुमिमा एक्लै छाडेर सधैको लागि टाढा हुनु भयो मेरो बुडो ।
दुई बुडाबुडी हास्दै रमाउदै घर जाने बेला म बाकसमा लास लिएर कसरी फर्किउ । मेरो हजुर हजुरसँग सम्बन्ध जोडेको पनि जम्मा ६ बर्स त भयो । किन यति छोटो समयमा मलाई एक्लै बनाएर जानु भयो ।
मेरो बाबा मर्नुभन्दा २ दिन पहिले मेरो डिउटीमै १० मिनेट भेटेर जानु भयो । त्यो नै अन्तिम भेट भयो ।
तपाईलाई भेट्न आउछु भनेर पकाएको मासु भात अरुले नै खाए । हजुरलाई भनेर किन्देको रक्सी अझै तेत्तिकै छ । ७ घन्टा मात्रै केहि नभैदिए म मेरो बाबालाई भेट्थे ।
किन यति धेरै निष्ठुरी भयौ भगवान । मेरो घरको पिलर ढाल्यौ, हामी सबैको बाच्ने सहारा यति छिटै किन खोस्यौ भगवान ? किन यति धेरै निस्ठुरी भयौ भगवान ? मेरो यो उमेरमा सिउदोको सिन्दुर पुछियो ।
मेरो बाँच्ने आधार भत्कियो । अब समाजले मलाई बिधबा भन्ने होला । अलक्षिनी आईमाई भन्ने होला । म दुनियाँको अपमान सहेर कसरी बाचौला । हजुरले त हामिलाई छाडेर जानु भयो । मेरा अगाडिका ठुला-ठुला जिम्मेवारी म कसरी पुरा गरूँ ।
मेरो दुधे नानीलाई म एक्लै कसरी हुर्काउ । हामिलाई जकेट लाएर चिसो हुन्छ, कम्बल ओडेर चिसो हुन्छ । झन् हजुर त चिसो बरफमा हुनुहुन्छ । हजुरलाई झन कति धेरै चिसो भएको होला मेरो बुडो ।
दिनमा १०० पटक काली भन्दै फोन गर्नुहुन्थ्यो । अब त हजुरको फोन आउनै छाड्यो । बिदेशको ठाउमा छु, मलाई सम्हालिदिने कोहि छैन भनेर आफैले आफैलाई सम्हाले तर अब त सम्हाल्न सकिन ।
सिरिफ ६ दिन भयो हजुरले मलाई छाडेर जानु भएको । यो ६ दिन त मेरा लागी ६ बर्ष झै लाग्यो भने अझै पुरा जिन्दगी बाँकी छ । हजुर बिना म कसरी बाँचु । अब मेरो लागि आकाश खस्यो, धर्ती फाट्यो संसाररै अध्यारो भयो ।
मेरो कर्ममा सुख र माया पाउन लेखेको रहेनछ, त्यसैले यति छिटै भगवानले टपक्क टिपेर लिनु भयो । यो जुनिमा लामो समय हजुरको माया र साथ पाउन सकिन, अर्को जुनि धेरै लामो आयु लिएर आउनु अनी धेरै माया र साथ दिनु ल । मेरो प्यारो मान्छेलाई म अभागी बेसहाराको धेरै-धेरै माया छ, जुनि जुनिसम्म हजुरको स्वर्गमा बास होस । मेरो बुढो, मेरो काले !